सूचना विज्ञापन | Ratopati
कहाँ–कहाँ छ कर्मचारी माग ? सूचना हेर्नुहोस् access_timeचैत ३, २०७६
काठमाडौं । के तपाई कामको खोजीमा हुनुहुन्छ रु यदि हुनुहुन्छ भने आजको कान्तिपुर दैनिकमा रोजगारीसम्बन्धी विभिन्न सूचना प्रकाशित भएका छन् । जुन तपाईँले खोजेजस्तो पनि हुनसक्छ । सूचना हेर्नुहोस्ः
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा जागिर खुल्यो (सूचनासहित) access_timeफागुन ३०, २०७६
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। कम्पनीले खुला, समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नेगरी दरखास्त आह्वान गरेको हो । बिहीबार प्रकाशित सूचनाअनुसार नायव...
प्रोजेक्ट मेनेजरदेखि स्टोर किपरसम्म : ३७ कर्मचारीको माग (सूचनासहित) access_timeफागुन ३०, २०७६
काठमाडौं । हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लागि भन्दै सीई कन्ट्रक्सनले ३७ कर्मचारीको माग गरेको छ । कम्पनीले प्रोजेक्ट मेनेजर, टनेल इन्जिनियर, जिओलोजिस्ट, सर्भेयर, प्लान्ट इन्चार्ज, स्टोर कोअर्डिनेटर, स्टोर किपर, एचआर अफिसरलगायतका पदमा कर्मचरी माग गरेको हो । इच्छुक उम्मे...
कहाँ–कहाँ छ कर्मचारी माग ? सूचना हेर्नुहोस् access_timeफागुन २९, २०७६
एसओएस बालग्राममा एकल महिलालाई तालिमसहित आकर्षक रोजगारीको अवसर (सूचनासहित) access_timeफागुन २३, २०७६
काठमाडौं । पारिवारिक संरक्षणबिहीन तथा परिवारको संरक्षणबाट बञ्चित हुने अवस्थामा रहेका बालबालिकाका लागि नेपालमा ४८ वर्षदेखि कार्यरत एसओएस बालग्रामले २५ जना एकल महिला (अविवाहित, विधवा तथा पारपाचुके गरेका) लाई १२ महिने तालिमसहित रोजगारी दिने भएको छ । १० ...
रोजगारीसम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस् access_timeफागुन २२, २०७६
काठमाडौँ । के तपाईँ रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ ? काम गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि जागिर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? आजको कान्तिपुरमा कर्मचारीको माग सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ । जुन तपाईँको योग्यता, क्षमता र चाहना अनुरुपको पनि हुनसक्छ । सूचना हेर्नुहोस्ः
विद्यालयमा वार्षिक उत्सव, भेला नगर्न मन्त्रालयको आग्रह (सूचनासहित) access_timeफागुन २०, २०७६
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयको वार्षिक उत्सव, सभा, अभिभावक भेला नगर्न आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र सन्त्रास फैलिएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनका लागि भेला नगर्न आग्रह गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा आज न...
रोजगारीसम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस् access_timeफागुन १८, २०७६
कहाँ-कहाँ छ जागिर ? रोजगारीसम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस् access_timeफागुन १७, २०७६
काठमाडौँ । के तपाईँ रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ ? काम गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि जागिर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? बुधबारको कान्तिपुरमा कर्मचारीको माग सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ । जुन तपाईँको योग्यता, क्षमता र चाहना अनुरुपको पनि हुनसक्छ । सूचना हेर्नुहोस्ः
धितोपत्र बोर्डले माग्यो विभिन्न पदमा कर्मचारी access_timeफागुन १६, २०७६
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नेगरी बोर्डले कर्मचारी माग गरेको हो । इच्छुक र योग्यता पुगेका उम्मेदवारले आगामी चैत ६ गतेभित्र र दोब्बर दस्तुतर तिरेर त्यसको थप ...
कहाँ-कहाँ छ जागिर ? रोजगारीसम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस् access_timeफागुन १४, २०७६
कहाँ-कहाँ छ जागिर ? रोजगारीसम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस् access_timeफागुन ६, २०७६
काठमाडौँ । के तपाईँ रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ ? काम गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि जागिर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? आजको कान्तिपुरमा कर्मचारीको माग सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ । जुन तपाईँको योग्यता, क्षमता र चाहना अनुरुपको पनि हुनसक्छ । सूचना हेर्नुहोस्ः ...
खानेपानी व्यवस्था बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान access_timeफागुन ६, २०७६
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । बोर्डको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गरी पदपूर्ति गर्नेगरी दरखास्त आह्वान गरिएको छ । योग्यता पुगेको इच्छुक नेपा...
नेपाल वायुसेवा निगममा जागिरः यी उम्मेदवारको जागिर पक्का (नामावलीसहित) access_timeफागुन ४, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले लिखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि बोलाएको छ । निगमले आइतबार निकालेको सूचनाअनुसार सफल उम्मेदवार १५ दिनभित्र निरोगीताको प्रमाणपत्रसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद‍्मा कर्मचारी माग (सूचनासहित) access_timeमाघ २४, २०७६
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । परिषदले शुक्रबार एक सूचना निकाल्दै २१ दिनभित्र आवेदन दिन सूचित गरेको छ । परिषद्ले रिक्त रहेका सह प्रशासक, मुख्य प्रशिक्षकदेखि अटोमोबाइल प्रशिक्षक सहायकसम्मको पदमा खुला प्रतियो...
कहाँ-कहाँ छ जागिर ? रोजगारीसम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस् access_timeमाघ २०, २०७६
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा कर्मचारी माग (सूचनासहित) access_timeमाघ १७, २०७६
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले रिक्त रहेका विभिन्न पदहरुमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । उपप्रवन्धकदेखि चालकसम्मका २७ पदमा खुल्ला तथा समावेशी र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी स्थायी पदपूर्ति गरिने शुक्रबार प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । इ...
भारतीय दूतावाससहित विभिन्न ठाउँमा कर्मचारी माग access_timeमाघ १६, २०७६
काठमाडौँ । काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास, विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्ट, रेडियन्ट सहकारी, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतले कर्मचारी माग गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित कर्मचारी माग सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्
लोकसेवा आयोग : स्थानीय तहका लागि सञ्चालित लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक access_timeमाघ १५, २०७६
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला गरेको विज्ञापन अनुसार लिएको लिखित परीक्षा अन्तर्गत कम्युटर अपरेटर पदको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सफल उम्मेदवारलाई आवश्यक कागजातसहित अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ । सूचना हेर्नुहोस्ः ...